Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ka qeybgalay shirkii ICMG lana kulmay Lynn Pasco | Calanka Somalia
← SHIR SAXAAFADADEED LAGU SHARCIYEEYNAYAY MAAMULKA BANAADIR STATE OO MUQDISHO KA DHACAY.
Cid waliba waa og tahay in TFG-du ayna xalaal ku dhisnayn. →
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo ka qeybgalay shirkii ICMG lana kulmay Lynn Pasco
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo jooga Nairobi ayaa 30kii Maarso ka qeybgalay shir aad iyo aad u mihiim ah oo ay soo qaban qaabiyeen Qaramada Midoobey oo lagu qiimeynayey waxqabadka iyo horumarka laga sameeyey Roadmap ka iyo soo afjaridda xilliga kala guurka ah.
Shirkan ayaa waxaa ka soo qeybgalay Lynn Pascoe oo ah ku xigeenka Xoghayaha Guud ee QM ee Arrimaha Siyaasadda iyo wafdi uu hoggaaminayey. Sidoo kale kulankan waxaa ka soo qeybgalay Alexander Rondos oo ah Ergeyga gaarka ah ee Midowga Yurub ee Geeska Afrika iyo diblomaasiyiinta beesha caalamka ku sugan Nairobi. Shirkan ayaa waxaa shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Ergeyga Gaarka ah ee QM u qaabilsan Soomaaliya.
Ugu horreyntii waxaa kulanka khudbad ka jeediyey Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Dr Abdiweli Mohamed Ali oo warbixin dheer ka siiyey ka soo qeybgalayaasha horumarka baaxadda leh ee laga sameeyey dhaqangelinta Roadmapka oo uu sheegay in Soomaalidu ay ka go’antahay soo afjaridda xilliga kala guurka ah, sheegayna in 6dii September madaxda Soomaalida ay illaa iyo hadda si wadajir ah oo midnimo leh ay uga wada shaqeynayaan dhameystirka dhammaan qeybaha Roadmapka. Ra’iisul Wasaarahu waxuu sheegay in qeybaha ugu muhiimsan Raodmapka oo ku xiran in xilliga kala guurka la soo afjaro ay yihiin qeybta labaad ee ka kooban dhameystirka dastuurka iyo dib-u-habeynta baarlamaanka oo uu sheegay inay labadooduba muhiim u yihiin sidii loo heli lahaa Dowlad rasmi ah oo ay Soomaaliya yeelato bisha August. Ra’iisul Wasaarahu waxuu xusay shirkii Galkacyo ee 26kii Maarso in madaxda Soomaalidu ay isla garteen in la dedejiyo dhaqangelinta sidii loo soo xuli lahaa xubnaha golaha ansixinta dastuurka oo uu sheegay inay noqon doonaan kuwo matala Soomaalida qeybaheeda kala duwan sida dumarka, dhalinyarada, culmaa’udiinka, madaxda dhaqanka, bulshada rayidka ah iyo dhammaan qeybaha bulshada. Waxuuna sheegay in 825 laga dhigay xubnaha golaha ansixinta dastuurka oo lagu saleeyey habka awood qeybsiga ee 4.5 tanoo sahleysa sidii si fudud loogu qeybsan lahaa lehna habraac hore.
Ambassador Mahiga ayaa Ra’iisul Wasaaraha uga mahadceliyey warbixinta tifatiran iyo sida ay Soomaalida uga go’antahay soo afjaridda xilliga kala guurka ah. Ambassador Mahiga ayaa ka codsaday beesha caalamka inay soo dedejiyaan dhaqaalihii lagu dhameystiri lahaa howlaha harsan oo ay ka mid yihiin soo xulida iyo isu keenista golaha ansixinta dastuurka iyo soo xulida xubnaha baarlamaanka cusub.
Lynn Pascoe oo isna goobta ka hadlay gunaanadkii ayaa sheegay inuu ku faraxsanyahay sida uu shirka u dhacay iyo sida saraaxadda leh ee looga dooday arrimaha muhiimka ah. Waxuuna sheegay in uu ku laaban doono New York isla markaana ka howlgali doono sidii loo Soomaaliya looga saacidi lahaa dhameystirka xilliga kala guurka ah iyo soo celinta amniga iyo kala danbeynta dalka.